कसरी छुटाउने पानपराग खान ? | Taja Update
न्याय सम्पादनमा व्यवहारिक भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको एशोसिएशनका अध्यक्षको भनाइ
कोरोना प्रभावित सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको नेकपा उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको दाबी
प्रदेशको राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल जारी
सीमा नजिक बनेका सडक, बाँध, तटबन्ध तथा भौतिक संरचनाहरु तत्काल हटाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
चौतारीका डेपुटी सि.ई.ओ जोशीचौतारी छाडदै ।
भारतसँग सम्बन्ध विग्रने अवस्था आए नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्न सक्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको टिप्पणि
कसरी छुटाउने पानपराग खान ?
बैशाख १० काठमाडौं – पराग र गुट्खा खानेलाई मात्र होइन सँगैबस्ने परिवारलाई पनि हानी पु–याउँछ । उमेर पुगेका मानिसले मात्र होइन भर्खरका युवायुवतीहरुको पनि पराग र गुटखा बानी हुन्छ । युवाअवस्थामै गुटखा,पराग खाने बानी लाग्यो भने त्यसको लत छुटाउन निकै कठिन हुने गर्छ । यो ड्रग्सको लत जस्तै हुने गर्छ । यसले गर्दा मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
जब पराग र गुट्खा खाने लत बस्छ त्यतिबेला अदुवाको मिश्रणलाई चपाईराख्नु पर्छ । यसले परागको आनन्द दिनुका साथै खाना अरुचि र कब्जियतको समस्याबाट पनि छुटकारा मिल्दछ ।सुकमेलः जिरा, सुकमेल, हरद, सुकेको अमलाको मिश्रणले पनि परागको नशाबाट छुटकारा मिल्न सकिन्छ । जतिबेला पराग खान मनलाग्ने हुन्छ त्यतिबेला यो मुखमा हाल्ने गर्नुपर्छ । यसले ग्याष्ट्रिकबाट छुटकारा मिल्छ ।
जुवानोः ५०÷ ५० ग्राम जिरा र जुवानोलाई भुटेर मिश्रण गर्ने । यसमा बिरे नुन र कागतीको रस मिलाउनुपर्दछ । यसलाई सुख्खा बनाएर भाँडोमा राखिराख्ने र परागको खान मनलागेको बेला यस मिश्रणलाई मुखमा चपाउनुपर्दछ । यसले ग्याष्ट्रिकको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
Posted in समाचार, स्वास्थ्य/जीवनशैली
बैशाख १० , काठमाडौँ ।शुक्रवार सुनको मुल्यमा ५ सयले गिरावट आएको छ । विहीवार प्रतितोला ९२ हजार २ सयमा कारोवार भएको सुनको मुल्य शुक्रवार प्रतितोला ९१ हजार ७ सयमा कारोवार भइरहेको छ । शुक्रवार तेजावी सुनको प्रतितोला ९१ हजार २ सयमा कारोवार भएको छ। शुक्रवार चाँदीको मुल्यमा १५ रुपैयाले गिरावट […]
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सवारी पास लिनेको भिड
निजामति सेवा ऐन पारित गरेसगै नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा
अदालतमा प्रधानमन्त्रीले दिए जवाफ